ज्यान जोगाउन पाउ भन्दै गायक बद्री पंगेनी वि!!रुद्ध प्रह!!रीमा उ!!जुरी
चुनावको बेलामा राजनैतिक पार्टीको गीत गाएर चर्चासँगै विवादमा तानिएका गायक अहिले फेरी वि!!वादमा तानिएका छन् । लोक गायक तथा ‘लोक दोहोरी प्रतिस्थान’का अध्यक्ष बद्री पंगेनीविरुद्ध ज्या!!न जोगाउन माग गर्दै प्रहरीमा उ!!जुरी दर्ता भएको छ । काठमाडौं सितापाइला निवासी निमा दोर्ची शेर्पाले काम गरेको पारिश्रमिक माग्दा आफूलाई गायक पंगेनीसहित तीन जनाले ज्या!!नै लिने ध!!म्की दिएको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गायक पंगेनी र उनका साथीहरु विजय सिंह, सुवास अधिकारीविरुद्ध उजुरी परेको हो । काठमाडौं प्लाजामा सञ्चालन गरेको नीरमाया दोहोरी साँझमा काम गरेको रकम माग्न ध!!म्की दिएको भन्दै उनीहरु!!विरुद्ध उ!!जुरी परेको हो ।
फाइल तस्विर बद्री पंगेनी
शेर्पाले सञ्चालन गरेको श्रृष्टी फर्निचरबाट झण्डै ५५ लाख रुपैयाँ बढीको लागत दोहरी साँझमा नयाँ डेकोरेशन गरेका र काम सम्पन्न गरेको ३ महिनापछि पैसा माग्न जाँदा ध!!म्की दिएको पीडित पक्षको भनाइ छ । यस विषयमा आरोपित बद्री पंगेनीलगायतले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
लोकदोहोरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहेका पंगेनी वि!!वाद आइरहने लोक गायक हुन् । केही समय अगाडि उनी काठमाडौंमा जुवा खालबाट रंगे!!हात पक्राउ परेका थिए । यसबारेमा आरोपित बद्री पंगेनीले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । केही समय प्रहरी हिरा!!सतमा रहेका पंगेनी सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुको दबाबमा छुटेका थिए ।
लोकप्रिय गायक बद्री पंगेनीको यो समाचार सार्वजनिक भएसँगै उनले आफ्ना फ्यान फ्लोअर्सहरु घट्ने कुरा निश्चित भएको छ । आशा छ भविष्यमा यस्ता कुराहरु सुन्न नपरोस् ।